Wel Come To www.sumanday.blogspot.com
तपाईंहरु पनि यो साईटमा भएका बिषयहरु सँग सम्बन्धित आफ्ना लेखहरु पोस्ट गर्न चाहनु भने तल दिईएको ठेगानामा पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछु सम्पर्क ठेगानाः sumankhadka30@gmail.com तपाईंहरुबाट प्राप्त भएका आर्टिकलहरुलाई सकेसम्म चाडै तपाईंहरुकै नाम दिएर प्रकाशित गरिनेछ ।
सम्भmी साछु दिन रात विष्ािएको छुइन
प्रेमी तिम्रो मनै हु पराइ त होइन
टाढा छु तिमी बाट तिमिलाइ छोड्‍न हौइन
सधै भरी तिमीबाट टाढा हुने छुइन
लेख्दैछुनी प्रेमपत्र विष्ािएको छुइन
सम्हालेको छुनी प्रेमपत्र पढन छोड्‍या छइन
पवित्र छ मेरो ह्रदय विष्ािने छदै छुइन
पूजा गरी वस है पि्रय खुसी टाढा छइन
फुल जस्तो तिम्रो जोवन ओल्याउन दिने छुइन
सुगन्धलाइ जोगाइ राख खुसी टाढा छइन
बाट : सुमन खड्का(ME)
सुनेको थिए जिवन दुई आत्माको मिलन रे
जहाँ पवित्र माया प्रेम हुन्छ रे
सुनेको थिए जिवन घामछायाको दर्पण रे
जहाँ परिस्थिती अनुसार चल्नु पर्छ रे
सुनेको थिए जिवन मिलन र बिछोडको सँगम रे
जहाँ आँसु पिएर तिर्खा मेट्नु पर्छ रे
आखिर केही होइन रहेछ जिवन हाम्रो लागि
जहाँ बिष पिएर अमृत सम्झनु पर्छ भने
हासन मनाइ छ
एक महिला स्वीमिंग पुलमा आइ र कपडा खोलेर नुहाउनका लागि दौडि । चौकिदारले रोक्यो "यो समय यहा नुहाउनका लागि प्रतिबन्ध छ ।"" तर तिमिले त्यति बेला किन बताएनौ जति बेला म कपडा खोल्दैथिए ।" "नुहाउन मनाति हो,कपडा खोल्न हौइन ।"
एउटै ब्लड ग्रुप
डाक्टरले आश्चर्यले सोध्यो अरे तिमिहरु दुवै पतिपत्नीको ब्लड ग्रुप एउटै छ, बी ग्रुप । पति बोल्यो यसमा हैरान हुने के कुरा छ । उ २० वर्ष्ादेखि मेरो रगत जो चुस्दैछे ।
मम्मिले त पचास रुपैया दिनुहुन्छ
रेखा आनटी घर आएको बेला पापा पारसलाइ फकाउदै .ंम तिमिलाइ दस रुपैया दिन्छु तिमि घर बाहिरको दौरमा गएर खेल है रुप्ाारस अलि रिसाउदै यो पापा त कस्तो कन्जुस हुनुहुन्छ । मम्मिचाहि राजेस अंकल घरमा आउदा सधै बजारमा गएर आइसत्रिmम खानु भनेर पचास रुपैया दिनुहुन्छ ।
एपेन्डिसाइटिस्‍ के हो ?
तपाइ हामीमध्य धेरैलाइ जिज्ञासा लागन सक्छ आखिर के हो यो एपेन्डिसाइटिस्‍ भनेको ? आउनुहोस यसको बारेमा सामान्य चर्चा गरौ ।हाम्रो शरीरमा दुइ किसिमको आन्द्रा हुन्छ एउटा ठुलो आन्द्रा र अर्काे सानो आन्द्रा । यी दुइबटा आन्द्राहरु मध्य हाम्रो पेटको तल्लो भागको दाहिनेपटि ठुलो आन्द्राको माथिल्लो टुप्पोको छेवैमा एउटा बन्द नलि हुन्छ । यो लगभग ३ इन्च लामो हुन्छ । तर हाम्रो उमेर बढदै गएपछि यो खुम्चिदै जान्छ । हो यहि बन्द नलीलाइ नै एपेन्डिसाइटिस्‍ भनिन्छ । घास खाने जनावरहरुमा यो अंगको विशेस महत्व हुन्छ किनभने यस अंगमा रहेको व्याक्टेरियाले घासमा पाइने सेल्युलोजलाइ पचाउन मद्यत गर्छ । त्यसैले जनावरहरुमा यो अंग सत्रिmय र उपयोगि हुन्छ । तर मान्छेमा भने यो अंगको कुनै उपयोगिता नै हुदैन । त्यसैले यो अगं पनि निष्त्रिmय रहेको हुन्छ । हाम्रो जीवनमा यो अगंको कुनै उपयोगिता नै नरहने हुनाले धेरैलाइ आफ्‍नै शरिरमा हुने यो अगंबारे राम्रो थाहानै हुदैन तर कुनै कारण्ावश यो अगंमा प्वाल पर्छ वा कुनै घाउ बन्न जान्छ अथवा हाम्रो पेटमा नपचेको भोजन वा आन्द्रामा बनेको मलको कण्ा प्रवेश गरेेर त्यसको मुखमा प्रवेश गर्छ त्यस अवस्थामा यो अगं फुल्न थाल्छ । किटाण्ाुग्रसित भएको कारण्ा यस अंगमा तीब्र पीडा हुन थाल्छ । यो संत्रmमण्ा हाम्रो पेटमा समेत फैलिन थाल्छ र जसले गर्दा हामीलाइ पेटमा निकै तीब्र पीडाको महसुस हुन्छ । विशेष्ा गरेर हाम्रो दाहिने फिलाको हड्‍डी र नाइटोको बीच भागमा अति नै कडा दुख्छ । हामिलाइ खानाप्रति अरुचि हुने ,वाकवाक लागने,वान्ता हुने,ज्वरो आउने,कब्जियत हुने,भmाडा पखाला लाग्ने जस्ता लक्ष्ाण्ाहरु देखापर्न थाल्छन्‍ । हो,यही अवस्थालाइ एपेन्डिसाइटिस्‍ भन्ने गरिन्छ । एपेन्डिसाइटिस्‍ भएपछि त्यसबाट मुतिm पाउने एउटै उपाए तुरुन्त शल्यत्रिmया नै हो यस शल्यत्रिmयामा एपेन्डिसाइटिस्‍लाइ काटेर निकालिन्छ । यो अगंको हाम्रो शरिरमा कुनै उपयोगिता नै हुदैन,त्यसैले यसलाइ काटेर फालिदिदा पनि हाम्रो शरिरमा कुनै किसिमको असुविधा वा जटिलताहरु हुदैनन्‍ । एपेन्डिसाइटिस्‍को समस्याले विशेष्ा गरेर युवावस्थामा बढी पिरेको पाइन्छ । तर यो समस्या कुनै पनि उमेरको मान्छेमा पनि देखापर्न सक्छ ।
अब्बाको पातलाइ एउटा भाडामा थोरै पानिको साथमा उमालेर काढा तयार गर्ने र सो काढा नियमित कुल्ला गर्ने गरेमा दातको विभिन्न रोगहरु न्ााश हुनुका साथै ढाड दुख्ने रोग पनि कम हुदै जान्छ ।
एक गिलास पानीमा तुलसीको पत्तामा मिश्री,अदुवा र सुकमेललार्इ उमालेर दिनको दुर्इ पटक पिउने गरेमा जमेको कफ्‍ निस्किन्छ।
टमाटरलार्इ हामि तरकारी भन्दछौ तर बनस्पतिशास्त्रको भाष्ाामा यो एक फल हो । विश्वमा हरेक वर्ष्ा ६ करोड टन भन्दा बढी टमाटर फलाइन्छ । सबै भन्दा लोकपि्रय फल पनि यही नै हो । दोस्रो बढी लोकपि्रय फल केराको वाष्ािक उत्पादन टमाटर भन्दा एक करोड ६० लाख टन कम छ । अमेरिकाको एज्टेक र इंका सभ्यताले सबै भन्दा पहिले ७०० एडी मा टमाटर फलाएको विश्वास गरिन्छ । युरोपमा सन्‍ १५५६ तिर टमाटर देखापरेको बताइन्छ । प्रmान्सेलीहरु टमाटरलार्इ "दि एप्पल अफ लभ" भन्छन्‍ ।टमाटरमा भिटामिन ए र सि तथा फाइबर पाइन्छ । टमाटरमा लाइकोपेन नाम तत्व पनि पाइन्छ । पकाएको टमाटर खाएमा प्रसस्त लाइकोपेन पाइने भएकाले क्यान्सरबाट बच्न यसले सहयोग गर्छ । विश्वमा दश हजार भन्दा बढी प्रजातिका टमाटर पाइन्छ ।
असल मित्रतामा हुनुपर्ने गुण्ाहरु·
मित्रताको लागि सधै हसिलो र उज्यालो मुहार बनाउनु जरुरि हुन्छ ।
· असल मित्रसंग एक अर्कामा सुख, दु:ख सरल वा गोप्य कुराहरु खुलाउन जरुरि हुन्छ ।
· आपसमा विश्वासिलो बन्नु पर्छ ।
· असल मित्रमा माया हुनु पर्दछ,आफुलाइ भन्दा ज्यादा माया आफ्‍नो घनिष्ट मित्रलाइ गर्न सक्नुपर्छ ।
· असल मित्रका लागि बलिदानि बन्न सक्नुपर्छ दु:खमा मित्रलाइ कहिले एक्लै छाड्‍नु हुदैन ।
· यदि तिमि असल मित्र हौ भने आफ्‍नो मित्रलाइ पनि आफनै परिवारको सदस्य समान माया गर अनि स्थान पनि परिवारको जस्तो देउ ।
· अहकार,आडम्बर,रिस,र्इष्र्या,घमण्डीपन असर मित्रताका लागि सबैभन्दा ठुलो सत्रु भएकाले ती सबै कमजोरिहरु त्यागनुपर्छ ।
· तिमि भmुट नबोल यो मित्रताको बाधक तत्व हो जुन त्याग्न अति आवश्यक हुन्छ ।
· मित्रतामा थोरै घुर्की र थोरै रिस पनि प्यारो हुन्छ ।
· पैसाको कारोबार मित्रतामा उपयुतm हुदैन ।
· आफुभन्दा माया गर्ने मित्रको साना कैयौ गल्ति सहनु पर्छ ।
· उ आगो भए तिमी पानि बन तब पो सार्थक मित्रता बन्दछ ।
· तिमिले आफ्‍नो मित्रताको लागि समय राख्नैपर्छ ।
· असल मित्रतामा अभिमान र घ ृण्ाायुतm शब्द बोल्दै नबोल ।
MY COLLAGE FRN & ME
नेपाली अक्षरहरू युनिकोडमा टाईप गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
"नेपाली राष्टिय गीत तपाईंको आफ्नो कम्प्युटरमा download गर्न चाहनु हुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुस्"
funny pictures and many more fun
ब्यानर एक्सचेन्ज गर्नेबारे ब्लगर साथीहरु, तपाईंहरु 'http://sumanday.blogspot.com/’ सँग ब्यानर एक्सचेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तलको फोटो(ब्यानर) लगेर तपाईको ब्लगमा प्रकाशित गर्नुहोस् र त्यसमा 'http://.sumanday.blogspot.com/’ को लिंक जोड्नुहोस् वा तलको सानो बक्समा भएका कोडहरू लगेर आफ्नो ब्लगको html source मा हाल्नुहोस्, अनि 'http://sumanday.blogspot.com/’ मा प्रकाशित गर्नको लागि तपाईंको ब्लग झल्काउने एउटा फोटो(ब्यानर) र त्यसमा लिंक जोड्नुपर्ने ब्लगको ठेगाना, sumankhadka30@gmail.com मा पठाइदिनुहोस् ।
suman day image
मेरो यो ब्लग साइट हेरि दिएकोमा धन्यवाद ।
English Date & Time
माथि जान याहा क्लिक गर्नुहोस
Design by सुमन खड्‍का. Ethereal theme. Powered by Blogger.